Diet and men's fertility: does diet affect sperm quality? | BFC | Bahosi Fertility Centre
BFC | Bahosi Fertility Centre
Home » Diet and men's fertility: does diet affect sperm quality?
“အစာအာဟာရနှင့်အမျိုးသားတို့၏ မျိုးပွားနိုင်ခြင်း စွမ်းရည်’’
သုတ်ပိုးလေးများ၏ အရည်အသွေးကို အစာအာဟာရက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား၊
သားသမီးရရှိနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လွန်စွာအရေးပါပြီး အမျိုးသားများ၏မျိုးပွားနိုင် စွမ်းရည်ကို လွှမ်းမိုးသောအစာအာဟာရများကို သိရှိရန်မှာလည်း အလွန်အရေးကြီးလှ ပါသည်။ ဤသို့သိရှိရန် မှာ အရေးကြီးသည်ကို သိသော်လည်း သားသမီးရရှိရန် အထောက်အကူပြုနည်းလမ်းများ၏ အကူအညီဖြင့် ကြိုးစားနေကြသော အမျိုးသားများအတွက် တိကျသေချာသောလ မ်းညွှန်ချက်များကို ယနေ့ထိတိုင်မဖော်ပြနိုင်သေးပေ။ အစာအာဟာရနှင့်အမျိုးသားများ၏ မျိုးပွားနိုင်ခြင်းစွမ်းရည်ဆက်စပ်ပုံအကြောင်း နောက်ဆုံးတွေ့ရှိ ချက်များ နှင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းသော သုတ်ပိုး လေးများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုသော အစာအာဟာရအကြောင်းကို အဓိကထားဆွေးနွေးပေးသွားပါမည်။ သုတ်ပိုးကောင်းမွန်ရန်အတွက် အမျိုးသားများ အနေဖြင့် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်မှု ကို အားပေးသောဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ၊ ပင်လယ်စာများ၊ ကြက်သား ၊ဘဲသား၊ အစေ့အဆန်များ၊ မွမ်းမံခြင်း မပြုလုပ်ထားသော ဂျုံ၊ဆန်စသည့် သီးနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ နှင့်သစ်သီးဝလံများစွာ ပါဝင် သော အစားအစာစားသောက်မှုပုံစံကို စားသုံးရန် တိုက်တွန်းအားပေးထားပါသည်။သားသမီးရရန် အထောက်အကူပြုနည်းလမ်းများဖြင့် ကြိုးစားနေကြသော အမျိုးသားများကို ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုကို အားပေး သော ဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ၊ Omega3Fatty acid ကြွယ်ဝသော ငါးများနှင့်အစေ့အဆန်များကိုပိုမို စားသုံးစေခြင်းဖြင့် သိသိသာသာ ပိုမိုတိုုးတက်ကောင်းမွန်လာသော ရလဒ်ကောင်းများကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။သားသမီးရရှိရန်ကြိုးစားကြသော ဇနီးမောင်နှံ ခြောက်ပုံတစ်ပုံသည် တစ်နှစ်အတွင်းတွင် သားသမီးမရနိုင်သော ၊ သားသမီးရရန်ခက်ခဲသော ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ကြရပါသည်။ သားသမီးရရှိရန် အထောက် အကူပြုနည်းလမ်းများဖြင့် ကြိုးစားနေကြရသော စုံတွဲများ၏ ၅၀ %သည် အမျိုးသားကြောင့်မရခြင်းကို တွေ့ ရှိရသော်လည်း အမျိုးသမီးကြောင့် မရခြင်းကိုသာ အဓိကထားပြီး သုတေသန ပြုလုပ် ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၈၀ နှင့်စာလျှင် သုတ်ရည်ထဲတွင် ပါဝင်သောသုတ်ပိုးအရေအတွက်မှာ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ သိရပါသည်။ ဤကဲ့သို့သုတ်ပိုး အကောင်အရေအတွက်ကျဆင်းလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍သုတေသနများနှင့် အငြင်းပွားမှုများစွာ ရှိနေသော်လည်း စားသောက်သောအစားအစာများ၏ အရည်အသွေးမပြည့်ဝမှုနှင့် အဝလွန်နှုန်း မြင့်တက် လာမှုတို့မှာ ဤသို့ဖြစ်စေသော အခြေခံအကြောင်းတရားများဖြစ်ပါသည်။
၁- အစားအသောက်တွင် ပါဝင်သောကောင်းမွန်သော အဆီဓါတ်နှင့်သုတ်ပိုးများ၏ အရည်အသွေး ဆက်စပ်မှုသုတ်ပိုးများကောင်းမွန်စွာလုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်သုတ်ပိုး၏ခေါင်းကို ဖုံး အုပ်ထားသည့်အမြှေးပါးတွင်ပါဝင်သည့် ကောင်းမွန်သည့်အဆီဓါတ်မှာ အလွန်အရေးပါလှပါသည်။ မမျိုးဥနှင့် ပေါင်းစပ်သန္ဓေအောင်သည့်နေရာတွင် သုတ်ပိုး၏ခေါင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် အမြှေးပါးသည် အလွန်အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍများဖြစ်သည့်
၁- အလွန်လျင်မြန်သည့်နှုန်းဖြင့် မမျိုးဥဆီသို့သွားနိုင်ခြင်း
၂- မမျိုးဥထဲသို့ ဖောက်ဝင်ခြင်း
၃- မမျိုးဥနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း စသည့် အဆင့်များတွင် အဓိကပါဝင်ပါသည်။
ကောင်းမွန်သောအဆီဓါတ်ထဲတွင် ပါဝင်သော Polyunsaturated Fatty Acids (PUFAS)ကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် မထုတ်လုပ်နိုင်ဘဲ အခွံမာသီး၊ အစေ့အဆန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီများ သို့မဟုတ် ပင်လယ်စာ စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အဆီဓါတ်(သို့) ယင်းအဆီဓါတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းအားဖြင့် သုတ်ပိုး၏ ခေါင်းတွင် ဖုံးအုပ်ထားသော အမြှေးပါးတွင် ပါဝင်သည့် ကောင်းမွန်သောအဆီဓါတ်နှင့် သုတ်ပိုး၏ အရည်အသွေးကို ပြောင်းလဲပြုပြင်ပေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ငါးမှ ရသောအဆီဓါတ်ပါဝင်သည့် အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းနှင့် သုတ်ပိုး၏ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကောင်းခြင်း၊ သုတ်ပိုး၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှန်ခြင်း၊သုတ်ပိုးအရေအတွက်များခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ သားသမီးရအောင် အထောက်အကူပြု နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရသော အမျိုးသားများတွင်လည်း အိုမီဂါ3PUFAS သောက်သုံးခြင်းဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်မှန်သော သုတ်ပိုးရရှိစေပြီး ငါးများကိုစားသုံးခြင်းက သုတ်ပိုး၏ အရေအတွက် ပိုမိုများစေပြီး ပုံသဏ္ဍာန်မှန်သော သုတ်ပိုးကိုပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အပင်မှရသော အိုမီဂါ3အဆီဓါတ်များစွာပါသော သစ်ကြားသီးကို စားသုံးပေးခြင်းကလည်း သုတ်ပိုးများကိုတိုးပွားစေသည် သာမက သစ်ကြားသီးကိုမစားသုံးသည့်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သုတ်ပိုး၏ ကြံ့ခိုင်ရှင် သန်နိုင်မှု၊လှုပ်ရှားနိုင်မှုနှင့်ပုံမှန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိမှုတို့ကိုပိုမိုတိုးတက်စေပါသည်။ အမျိုးသားများငါးများများစား သုံးပေးခြင်းကလည်းအမျိုးသမီးကို အချိန်တိုအတွင်း ကိုယ်ဝန်ရရှိစေနိုင်ပြီး သားသမီးမရနိုင်ခြင်း ပြဿနာများကို လျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
သို့သော်မကောင်းသောအဆီ(Trans Fatty acid) နှင့် ပြည့်ဝဆီများကို စားသုံးပါက သုတ်ပိုးများ၏ ထုတ်လုပ်မှု ကိုသာမက သုတ်ပိုးအ ရေအတွက်ကိုပါ လျှော့နည်း စေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မကောင်းသော အဆီ (Trans Fatty acid) နှင့် ပြည့်ဝ ဆီ ပါဝင်သော အစား အစာများမှာ အမဲဆီ၊ သိုးဆီ၊ ထောပတ်ပေါက်ပေါက်၊ ရောစပ် ထား သောဟင်းရွက်ဆီ၊ ချက်ပြုတ်ရာတွင်သုံးသော ထောပတ်ခဲ၊ အာလူးကြော်၊ ပြောင်းဖူး ကြော်နှင့် အာလူးချောင်းကြော်ကဲ့သို့သော ဆီထဲနှစ်ကြော်ထားသည့် အစားအစာ များ၊ ကိတ် (Cake) ၊ ခရက်ကာ(cracker) ၊ဘီစကစ် (Biscuit) ၊ကွတ်ကီး (cookies) ၊ ဒိုးနတ် (Doughnuts) ၊ခရိုးဆန့် (croissants) ၊ Apple pies ၊ဝက်အူချောင်း၊ ကြက်အူချောင်း၊ အမဲအူချောင်း၊ ကြက်အရေခွံ၊ ဝက်ဆီ၊ ပီဇာ၊ ရေခဲမှုန့်နှင့် non-diary coffee whiteners တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့မကောင်းသောအဆီများကို စားသုံးခြင်းသည် သုတ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေ သည်သာမကဘဲ အမျိုးသားဟော်မုန်းတက်စတိုစတီရုန်း (Testosterone) ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်း စေပြီးဝှေးစေ့အရွယ် အစားကို သေးငယ်စေ၍ ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
၂- သုတ်ပိုးလေးများ၏ ခံနိုင်စွမ်းရည်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုကို အားပေး သော ဖြည့်စွက်စာ
သားသမီးရအောင် အထောက်အကူပြုနည်းလမ်းများဖြင့် ကြိုးစားနေသော အမျိုးသား များကို ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုအားပေးသော ဖြည့်စွက် စာများကို စားသုံးစေခြင်းအားဖြင့် သုတ်ပိုး၏ အရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်သာမက သုတ်ပိုး၏ လှုပ်ရှားနိုင် စွမ်းကို အထူးကောင်းမွန် စေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သောရာခိုင်နှုန်းနှင့်ကလေးအရှင်မွေးဖွားနှုန်းကိုပါ မြင့်မားစေပါသည်။ ထိုသို့ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်သော ဓါတ်များဖြစ်သည့် ဗီတာမင်အေကို ဘီတာကာရိုတင်း ပါဝင်သော မုန်လာဥနီ၊ beetroot ၊ကန်စွန်းဥနှင့် ဟင်းနုနွယ်များ ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဗီတာမင်စီကို ရှောက်၊ သံပုရာ၊ လိမ္မော်၊ ဆန်းကစ်သီး၊ ဘယ်ရီသီးများ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတို့မှ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဗီတာမင်အီးကို ပြုပြင်မွမ်းမံထားခြင်းမရှိသောဂျုံ၊ဆန်စသော သီးနှံများ၊ အစေ့အဆန်များ၊ ငါးအဆီနှင့် အစိမ်းရောင်ရှိသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၃- One-Carbon Metabolism and spermatogenesis
သုတ်ပိုးလေးများဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သော one-carbon metabolism ဖြစ်စဉ်အတွက် ဖောလိတ် (Folate) နှင့်အခြားအာဟာရများသည် အရေးပါ သောနေရာမှပါဝင်ပါသည်။ Folic acid သောက်သုံးခြင်းသည် သုတ်ပိုးထုတ် လုပ် မှုကို ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေပါသည်။ Folic acid 15mg ကိုရက်၉၀ ကြာသောက်သုံးသော အမျိုးသားများတွင် သုတ်ပိုးအရေအတွက် ၅၃ % ပိုမိုများစေပြီး သုတ်ပိုး၏ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကို ၂ ဆတိုးပွားစေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ သုတ်ရည် ထဲတွင် ပါဝင်သော Folate သည်သုတ်ပိုး၏ DNAပျက်စီး မှုနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ Folate များများစားသုံးခြင်းအားဖြင့် သုတ်ပိုးတွင် chromo-some အရေအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပါဝင်ခြင်းကို လျော့ကျစေပါသည်။ Folate ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သော အစား အစာများမှာ ပဲ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ ကညွှတ်နှင့် အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိသော ဟင်းသီးဟင်း ရွက်များဖြစ်သည့် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့် ဟင်းနုနွယ်၊ ဥ၊ beets ၊ အစေ့အဆန်များ၊ အမဲအသည်း၊ သင်္ဘောသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ထောပတ်သီးနှင့် လိမ္မော်သီးကဲ့သို့ citric acid ပါသောအသီးများဖြစ်ကြပါသည်။ Folate ချို့တဲ့သော အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းသည် ကင်ဆာ၊ နာတာရှည်ရောဂါများ၊ ကိုယ်ဝန်ရမှုနည်းပါးစေခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုများခြင်းနှင့် သန္ဓေသားလောင်းတွင် ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံ မမှန်မှုများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
၄- နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့်အသားမှထွက်သော ပစ္စည်းများ
အဆီထုတ်ထားသောနွားနို့ကိုသောက်သုံးသည့်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆီမထုတ် ထားသောနွားနို့ကို သောက်သုံးသည့် အမျိုးသား များတွင်သုတ်ပိုး၏ လှုပ် ရှားနိုင်စွမ်း လျော့နည်းကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ချိစ်(cheese) ကဲ့သို့သော အဆီဓါတ်ပြည့်ဝသော နို့ထွက်ပစ္စည်းသည် သုတ်ပိုး၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော အမဲသား၊ ဝက်သားကဲ့သို့သော အနီ ရောင်အသားများ ကိုစားသုံးခြင်း သည် မစားသုံးသည်ထက် သုတ်ပိုး လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း ကိုနှစ်ဆကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုပြင် မွမ်းမံ ထားသော အသားများကို များများ စားသုံးပါက သုတ်ပိုး၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှန်မှုကိုပါ လျော့နည်းစေပါသည်။
၅- ပြဒါး (Methylmercury) ပါဝင်သော ရေနေသတ္တဝါစားသုံးခြင်း၏ ဆိုးကျိုး အထက်တွင် ငါးများများစားသုံးပေးခြင်းက သုတ်ပိုး၏အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး ကိုယ်ဝန်မြန်မြန်ရစေနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ပြဒါးဖြင့်ထိတွေ့ထားသော၊ ပြဒါး ပါဝင်သောငါးနှင့် အခွံမာရှိသောရေသတ္တဝါများ(ဥပမာ-ပုဇွန်၊ဂုံး၊ကမာ) စားသုံး မိခြင်းကမူ ပြောင်းပြန်ဆိုးကျိုးများကို ရရှိစေပါသည်။ အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် ထိုသို့ သောပြဒါး (Methylmercury)ပါဝင်သော ငါးနှင့် ရေသတ္တဝါ များကို စားသုံးမိ သောအမျိုးသားများအနေဖြင့် သုတ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ သုတ်ပိုး အရေအတွက်ကျဆင်းစေခြင်း ၊ သုတ်ပိုးလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းလျော့နည်းခြင်းနှင့် သုတ်ပိုး၏အမြှီးပုံစံ မမှန်ခြင်းစသော ဆိုးကျိုးများကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။
၆- ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်၏ သတိပြုဖွယ်အန္တရာယ်
ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော အာဟာရကြွယ်ဝသည့်စားသောက်မှုပုံစံဖြစ်ရန်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလံများကိုစားသုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် တစ်ခုသတိချပ်ရမည်မှာ ထိုဟင်းသီးဟင်း ရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများတွင် စိုက်ပျိုးရာ၌် အသုံးပြုရသော ပိုးသတ်ဆေးများ ကြွင်းကျန်နိုင်ခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေး အနည်းငယ်မှ အတန်အသင့်ကြွင်းကျန်နိုင်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလံ များဖြစ်ကြသော ကြက်သွန်နီ ၊ထောပတ်သီးနှင့်ပဲတို့သည် သုတ်ပိုး၏အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိပဲ ပုံစံမှန်သောသုတ်ပိုးများကိုရရှိစေပါသည်။ သို့သော် ပိုးသတ် ဆေးများစွာ ကြွင်းကျန်နိုင်သော စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ပန်းသီးနှင့် ဟင်းနုနွယ်ကို များစွာ စားသုံးခြင်း ကမူ သုတ်ပိုးများ၏ အရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။
သုတ်ပိုး၏အရည်အသွေးပုံမှန်အတိုင်း ကောင်းမွန်စေရန်မှာ အစားအစာစားသောက်မှု ပုံစံပေါ်တွင်များစွာမူတည်ပါသည်။ ကျန်းမာသောစားသောက်မှုပုံစံများဖြစ်သည့် မြေထဲပင်လယ်ဒေသ စားသော က်မှုပုံစံ(Mediterranean diet)သို့မဟုတ် ပင်လယ်စာ၊ ကြက်သား၊ဘဲသား၊ ပြုပြင်မွန်းမံခြင်း မပြုထားသော ဂျုံ၊ဆန်၊ကဲ့သို့သီးနှံများ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊အဆီထုတ်ထားသော နို့၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီး ဝလံများကို များများစားသုံး ပေးခြင်းကသုတ်ပိုး၏ အရည်အသွေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန် စေပါသည်။ သို့သော်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွှတ်သည့်စားသောက်မှုပုံစံဖြစ်သည့် မကောင်းသည့်အဆီများ၊ အနီရောင်နှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော အသားများ၊ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော သီးနှံများ၊ အချိုနှင့်အချိုကဲသော ဖျော်ရည်များကိုစားသုံးခြင်းကမူ သုတ်ပိုး၏ အရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေပါသည်။ ကျန်းမာသော စားသောက်မှုပုံစံဖြင့် စားသုံးပေးပါက သုတ်ပိုး၏( DNA )ပျက်စီးမှုကိုလျော့နည်း စေသည့်အပြင် သုတ်ပိုး၏အရည်အသွေး၊ အရေအတွက်နှင့် လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန် စေနိုင်ပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် အိုမီဂါ3ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သော ဖြည့်စွက်ဆေး သို့ ငါးနှင့်အစေ့အဆန်များကိုပိုမို စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့် သုတ်ပိုးထုတ် လုပ်မှုဖြစ်စဉ် ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါသည်။ ဓါတ်တိုး ဆန့်ကျင်မှုကိုအားပေးသောဖြည့်စွက်စာနှင့် one-carbon metabolism အတွက် လိုအပ်သော င်္ Folate ? ဗီတာမင် B12နှင့်ဇင့်တို့ကလည်း ကောင်းကျိုးများကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါသည်။
* Fertility and Sterility, Vol-110 No.4/ September 2018 မှ ကောက်နုတ်၍ အကျဉ်းချုပ်ရေးသားထားပါသည်။
Professor Mya Mya
Dr. May Thu Myo Nyunt
Dr. Nyan Coe
BFC 200 Babies Party
Bahosi Fertility Centre ၏ သားငယ်သမီးငယ် (၂၀ဝ) ပြည့် အထိမ်း အမှတ် ပျော်ပွဲရွင်ပွဲ ကို ရန်ကုန်မြို
First Baby Birth
The happy event of the first test tube baby delivery took place at Taungoo,Myanmar on 26th
BFC Opening Ceremony
BFC Opening Ceremony held on 8th April 2007.
BFC Babies Fun Day
So many happy and memorial activities of BFC Babies Fun Day held on 8th
Our BFC staffs go trips annually forarelax.
Copyrights © 2018 Bahosi Fertility Centre. All Rights Reserved.